IFTIINKACUSUB.COM: Qisso qosol badan:Waxa aan leeyahay madax Hadhuudh/Masago!
Qisso qosol badan:Waxa aan leeyahay madax Hadhuudh/Masago!
Iftiinkacusub.com: Waxkasta oo aad iska dhaadhicisaa ama aad rumaysataa waxaa laga yabaa in uu raad wayn ku yeesho noloshaada danbe,ay dhacdana in ay kugu siyaadiso xanuun iyo madaxwareer hadhaw aad kasoo laaban kari waydo.
Nin oday ah ayaa waxa uu isla dhaadhiciyay qadarka Allahay in uu madaxiisu yahay xabad HADHUUDH ah,kadibna waxaabu isu qaatay in uu madaxiisani yahay hal xabbo oo Hadhuudh ah,arintaasi oo ku abuurtay warwar aad u badan.
Markasta oo madaxiisa taabto ama uu Tumahiisa feedhaayo/shanlaynaayo waxa uu dareemaa in madaxiisu uu yahay xabad Hadhuudh ah,waxa uu ku mashquulay daawashada madaxiisa in uu markasta Muraayada isku eego ,taasi oo iyada lafteeda uu usu arkay in uu leeyahay madax ah xabad Hadhuudh ah.
Waxa taasi kasii daran in ,markasta oo uu Suuqyada ama wadooyinka uu maraayo,kadibna ay dadku si caadi ah isaga soo eegaan,waxa uu iska dhaadhiciyaa dadkaasi waxa ay kaa eegayaan kuuna fiirinayaan waa in aad leedahay madax ah xabad Hadhuudh ah ama Masaggo ah.
Ninkaasi isaga ahi waxa uu markasta warwar iyo cabsi ka qaadi jiray waxkasta oo xayaawaan ah oo jecel ama cuna hadhuudhka,taasi oo lafahiisa uga baqan jiray in ay maruun isaga oo aan iska warhayn in ay *daffaan ama ay kusoo boodaan .
Arintaasi markii ay ninkii ku samaysay warwar iyo shaki aad u badan,ayaa dadkii isaga ehelka u ahaa waxa ay ku tashadeen in ay ninkan u geyaan dhakhtar ku shaqa leh, xanuunada shakiga iyo waswaaska.
Dhakhtarkii ay u geeyeen ayaa waxa ay uga shekeeyeen in ninkan isaga ah uu qabo wax layidhaa shaki iyo waswaas taasina ay ku abuurtay in uu Madaxiisa/dhakadiisa u qaato ama u maleeyo in ay tahay hal-xabbo oo Hadhuudh ah.
Dhakhtarkii waa uu fahmay in xanuunka ninkan hayaa uu yahay shaki iyo waswaas,waxa uu u kuur galay sidii uu ninkan uga daawayn lahaa shakigan haya,ugana dhaadhicin lahaa in aanu madaxiisu ahayn Hadhuudh iyo Masago toona,ee uu yahay madaxisii saxa aha ee Ilahay SW uu u abuuray.
Dhakhtarkii iyo ninkii isaga ahaa ee Madax-Hadhuudhle,waxa ay ku kala tageen is-faham iyo kalsooni dheeraada oo uu dhakhtarkii siiyay ninkii Madax-Hadhuudhle.Markii madax-Hadhuudhle iyo qoyskisii ay dhamaantooda kasoo baxeen albaabkii dhakhtarka ayaa waxa uu madax-Hadhuudhle isha-ku dhuftay/arkay , Digaag aad u farabadan oo jooga Albaabka ama iridka dhakhtarka,kadibna isaga oo xiimaya ayaa dhakhtarkii uu dib ugu soo noqday.
Dhakhtarkii ayaa yaabay oo ku yidhi"" maxaa kugu dhacay,sawnagii hadda kuu sheegay in aanay Digaagu ku cuni karin isla markaana aadan lahayn madax Hadhuudh ah, madax- Hadhuudhle halkii hadal kale laga filaayay kuyee"waa runtaa dhakhtar,balse aniga ayuunbaad iga dhaadhicisay in aanan madax hadhuudh layahn, balse Digaagadaa kamaad dhaadhicin".
Halkaas waxa aad ka fahmaysaa in wali madax-hadhuudhle oo qabo waswaaskii iyo shakiigii ahaa waxa aad leedaay madax Hadhuudh.Arimahani waa inta badan bulshada ku yimaada,haddii aad u kuurgashana waxa aad arkaysaa waxyaabo intan kasii yaabadan,oo dadka qaarkood haysta.
Shakiga iyo waswaaska ha la iska ilaaliyo,Ilahay iyo Quraankiisa inta badan ha lagu xidhnaado,hadii kale waxaa kugu imanaysa in aad bari tidhaahdo waxa aan leeyahay madax SAANBUUSE ama madax BARIIS.ILAYAY WAXA AN KA BARYAYAA IN UU CAFIMAADKA INOO SIYAADIYO.